Hay'aduhu Waxay Doonaan Dammaanad Gelinta Maaliyadeed ee Mersin Metro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinHay'adaha Maaliyadeed Ayaa Dalbanaya Dammaanad Gelid Maaliyadeed Mersin Metro
28 / 12 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
mersin metro wuxuu doonayaa inuu dammaanad qaado qasnadda hay'adaha maaliyadeed
Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Dowlada Vahap Seçer ayaa kasoo qeyb galay munaasabaddii 28-guurada Sanadguuradii ay gaareen Ururka Warshadaha Mersin iyo Ururka Ganacsatada (MESİAD) iyo Berdan Bolt sanadguuradii 41aad ee Gala Night. Isagoo tilmaamay muhiimadda garoonka diyaaradaha ee dalxiiska iyo ganacsiga Mersin, Duqa magaalada Seçer wuxuu yiri: “Waa in garoonka la hirgaliyo. Dalxiiska ayaa noqon doona garoonka diyaaradaha, ganacsiga ayaa noqon doona garoonka diyaaradaha. Mersin waa waddo aad u gaaban oo ka socota adduunka oo dhan, oo qiimo aad u jaban, oo aan waqti lumin, dadku way imaan doonaan halkan haddii aad u baahatid garoon caalami ah, ”ayuu yidhi.
Warshadaha Mersin Warshadaha iyo Ururka Dadka Ganacsiga (MESİAD) Gudoomiyaha Hasan Engin, oo ay martigelinayaan kubada, Mersin Metropolitan Duqa Vahap Seçer'in, iyo sidoo kale Gudoomiyaha Gudiga Qorsheynta iyo Miisaaniyada Barlamaanka iyo kuxigeenka AK Party Mersin Lutfi Elvan, AK Party Mersin MP Hacı Özkan, Mersin Governor Ali İhsan Su, Gobolka Mediterranean iyo Taliyaha Garrison Rear Admiral Ercan Kireçtepe, Çukurova SIFED Madaxweynaha Süleyman Sönmez iyo borotokoolka magaalada oo ay la socdaan ganacsato aad u tiro badan.
Anigu waxaan ahay duqa magaalada oo aan la xiriiray qaar badan oo la soo doortay ”
Isagoo tilmaamay in shaqadoodu tahay inay u adeegaan Mersin, Madaxweyne Seçer wuxuu khudbadiisa ka bilaabay MESİAD wuxuuna ku daray inay tahay inay tan wada fuliyaan. Seçer wuxuu xusay inuu yahay siyaasi sanado badan ku qaatay dunida ganacsiga ogna maalgashiga, halista, dhaqdhaqaaqa lacagaha qalaad iyo dhididka wejiga "Khibrada laguma iibinayo lacag shelfiska suuqa, waxaad siin doontaa sanadahaaga. Sanad kasta waxaad ku bixisaa is dhexgalka bulshada inbadan. Uma shaqeynaysid bulshada, laakiin adigu naftaada. Waad hubsan kartaa. Waan garanayay Mudane Wasiirka sannado halkan, waxaanan fursad u helay inaan si wada jir ah u wada shaqeyno. Waxay ahayd qiimo weyn, tayo sare leh, bey'ad shaqo oo heerar badan leh. Waxaan ahay duqa magaalada oo xiriir la leh qaar badan oo la soo doortay.
"Waxaan nahay kudhaqanka howlaha muhiimka ah ee qiimaha badan"
Seçer wuxuu xusay inay Mersin ka jiraan shaqooyin muhiim ah wuxuuna yidhi, “Waxa ka jira Mersin howlo muhiim ah oo qiimo badan. Annagu waxaan nahay jilayaasha ugu waaweyn shaqooyinkan qiimaha badan. Haddii aan u hawlgalno shaqooyin muhiim ah oo qiimo badan, iyadoo aan loo eegin kala duwanaanshaha xisbiyada, annaga oo aan sameyn qiimeyn siyaasadeed, haddii aan isku imaatinno wadajirka guud ee Mersin, ma wajihi doonno dhibaatada aan shaaca ka qaadin astaamaha muhiimka ah ee magaaladan muhiimka ah. Laakiin waxaan ubaahanahay inaan wax qabano. Waxaan sidoo kale ognahay. Waxaan leenahay qiimayaal badan. Waxaan sameyn karnaa waxbadan ..
Siyaasadda Aset waxaa laga sameeyaa Ankara ”
Seçer wuxuu cadeeyay inuu hadafkiisu yahay inuu noqdo Duqa Magaalada kana tago siyaasad dhinacna leh, wuxuuna yiri, “Siyaasada waxaa laga sameeyay Ankara. Waxaan qabtay shaqadaas, waxaan qabtay shaqadaas. Sidoo kale waa la wada hadlay, waxaa jira halgan, laakiin howshaydu waa duqa magaalada. Iyada oo aan loo eegayn fikirka siyaasadeed ee loogu adeegayo dhammaan muwaadiniinta, iyada oo aan loo eegin fikirkaas, dhammaan wakiillada, badhasaabyada, Mudane Guddoomiye, la taliyaha, maareeyayaashayda, oo aan ahayn daruuriga ah in aan ka shaqeeyo iskaashiga, waa igu waajib. Maaddaama aan tan uga danaynayo, ayaan khudbaddayda ugu kaydiyey sidan oo kale. Daacad ayaan ahay, waan shaqeeyaa, waxaan doonayaa inaan u adeego oo aan gaaro. Waxaan rabaa inaan taas ku sameeyo anigoo ku hadlaya magaca Mersin. Marka hore, waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Mr. Elvan, Mudane Governor, xildhibaanada başta.
Aynu diyaarinno qorsheyaasha oo dhan annaga oo la wadaagno degmooyinka degmadeenna oo aan u oggolaanno hay'adaha aan dawliga ahayn inay yimaadaan.
Seçer, Mersin, iyo sidoo kale dhibaatooyinka muhiimka ah, fursadaha ayaa sidoo kale la muujiyey, iyaga oo taabanaya dhibaatada qorshaha. Seer wuxuu yiri:
“Mersin waxaa waajib ku ah inuu ku dhammeeyo qorshaha wejiga labaad ee 1/5000 waqti aad u yar. Waan iskaashinaa, waan wada hadalnaa. Hadda miis ayaan wada hadalnay. Maxaan qaban karnaa? Waxaan ubaahanahay inaan arintaas dardar galino. Maalgashadeyaashu ma heli karaan raadinta dhul maalgashi sameyn doona. Qorshuhu waa inuu joojiyaa inuu dhibaato ku noqdo Mersin. Dabcan ma doonayno inaan meesha ka saarno indhaha annaga oo sameeyna sunnayaasha. Maayir ahaan, waxaan rabaa inaan sameeyo tan; Bal aan diyaariyo dhammaan qorshayaasha hoos imanaya maamulka degmadeyda iyo degmooyinkeenna. Ururada aan dawliga ahayn waa inay yimaadaan oo ay taageeraan. Natiija ahaan, waxaan saxiixeyga hoos dhigay arrimaha daneynaya magaalada. Wadajir ahaan, waxaan qaadnaa mas'uuliyadda xisaabtanka dadkayaga. ”
“Waxaan hirgalin doonaa meeraha metroga
Seçer wuxuu kaloo xusay in MESİAD ay leedahay talo soo jeedin ku saabsan nidaamka loo isticmaali karo maalgashiga Metro oo yiri, "Waan xushmeyneynaa. Waxaan ka shaqeyneynaa tan. Waxaan mitrooga gelin doonaa nolosha. Waxaan ku samaynay isbedelo muhiim ah mashruuca aan ku aragnay dhabtayada. Waxaan u xisaabinay munaasabada faahfaahinta ugu fiican ee sida aan ugu soo qaadan karno adeegga tareenka Mersin qaab casriyeysan, ka hufan, maalgashi yar, gaadiidka dadweynaha. Laga soo bilaabo maalintii hore, waxaan tagnay qandaraaska. Waxaan galnay EKAB waxaanan si rasmi ah u dhameystirnay macaamilkeena. Waxaan tixgelinaynaa nidaamka tareenka 3 marxaladood. Nidaamka dhulka hoostiisa, dusha sare iyo taraamka. Waxaan sameyn doonaa bayaan ballaaran oo ku saabsan arrintan ”.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in hay'adaha maaliyadeed ay rabaan dammaanad Giddi oo loogu talo galay Metro, ayuu Madaxweynaha Seçer sheegay inuu u baahan yahay taageerada Qorshaha Barlamaaniga iyo Guddoomiyaha Guddiga Miisaaniyadda iyo AK Party Mersin kuxigeenka L Eltfi Elvan wuxuuna yiri, waxaan dhib ku qabnaa helitaanka maaliyadda. Hay'adaha dhaqaaluhu waxay naga doonayaan damaanad qaadka khasnadda ama waxay doonayaan inay na siiyaan maalgalin kharashyo aad u sarreeya Halkan waxaan ugu baahannahay taageerada Mr. Elvan marka hore. Haddii loo baahdo, waxaan jecelahay inaan ballan la sameysto Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo aan u booqdo isaga oo ah Duqa Magaalada Caasimadda ah si aan gacan uga geysto arrintan. Waxaan doonayaa inaan u adeego Mersin ”.
“Mersin keli uma horumarin karno”
Metro wuxuu danaynayaa in wajiga koowaad uu noqon doono qadka East-West, codbixiyaha Selecter, wuxuu sii watay hadalkiisa wuxuu sidoo kale xusay maalgashiga laga sameeyay Mersin. Duqa Vahap Seçer wuxuu yiri, waa maalgashi muhiim u ah ganacsatada Çamlıbel. Haddii beerta Nation la qabanayo, mashruucan oo ahaa mid la kiraystay, oo la dhammeeyay, dhismaha ayaa hadda la bilaabay. Maalgelintaan degmaheena, waxaan u rogi karnaa Mersinkii hore, Çamlıbel, xarun soo jiidasho leh. Sahamadayada, biyaha, bullaacadaha, wadooyinka, oo ay muwaadiniinteenu u arkaan meelaha ugu dhibaatada badan. Badanaa Galbeedka Mersin. Haddii aan soo noolaynno dalxiiska, ujeeddada ugu weyn ee booqashadeennii ugu dambeysay ee Ankara waxay ahayd in la abuuro midowgaas oo kale. Degmo ahaan, waxaan gacan ka geysan karnaa dardar-gelinta howlaha kaabayaasha iyo dariiqa loo maro maalgashiga dalxiiska. Ma sameyn karno Mersin kaligiis. Waxaan gudanaa waajibaadkayaga ah dawladaha hoose. Waxaan tan ku samaynaa maamulka dhexe, oo leh qolal xirfadlayaal ah iyo NGO-yo. Natiijooyinka ayaan si dhakhso leh u gaari karnaa.
Seçer wuxuu yidhi, “Madaarka waa in la hirgaliyo. Mr. Elvan si dhow ayuu ula socdaa, waan ogahay taas. Dalxiiska ayaa noqon doona garoonka diyaaradaha, ganacsiga ayaa noqon doona garoonka diyaaradaha. Haddii dadku ay u imaan doonaan Mersin adduunka oo dhan qaab aad u yar, oo kharash aad u yar, oo aan waqtiga lumin, waxaa loo baahan yahay garoon caalami ah. Wadada weyn waa saadaasha muhiimka ah. Waxaan rajeynayaa in masaafo muhiim ah la qaatay. Inta badan wadada xeebta ee Taşucu-Alanya ayaa dhammaaday. Fogaanta masaafo aad u gaaban. Kuwani waa maalgelinno muhiim ah. Maalgelinno badan oo sidan oo kale ah ayaa sidan oo kale ah. Waxaan isku dayaynaa. Waxaan sameyn karnaa khaladaad, laakiin waligeen khalad ma sameyn karno. Waxaan qalad sameyn karnaa. Waxaan soo dhoweyneynaa iskaashiga. Dhammaanteen waa inaan ku kulannaa Mersin oo aan wadaagno oo aan horumarinno Mersin. Waa inaan noqdaa midka ugu guulaha badan. ”
Seçer wuxuu la kulmay qoyska Berdan Civata
Gudoomiyaha Seçer, MESİAD 28th Ball Ball sanadkii xigay 41th Sanad Gala Night Berdan Civata ayaa ka soo qeyb galay. Habeenkii Berdan Civata A.Ş. Seçer wuxuu amaaney Hasan Şemsi, Gudoomiyaha Golaha Agaasimayaasha, wuxuuna yiri, “Waa nin aamin ah oo go'aan leh. Haddii kale, nin si daacad ah kuuguma sheegayo. Ma maamuli karo mowduucan, kuma guuleysan karo. Waxaan u dabaal. Waxaan nahay nin weyn, walaal, qof aan aad u ixtiraamo, muwaadin, xaafad. Waxay leedahay meel gooni ah. Inaga, lacag, tuban, warshado, hanti, hal dhinac oo qalbiga bini aadamka ayaa muhiim ah. Nin bini aadam ah, nin geesinimo leh, nin bulsho xasaasi ah. Waxaad ku arki kartaa isaga howlo badan oo bulsheed. Si uu bulshada ugaga qayb qaato arimo badan, wuxuu ku sii daraa habeenkiisa aan loo qalmin maalintiisa. Waan u hambalyeynayaa Wuxuu heley qoys sidan oo kale ah 41 sano. ”
Isagoo sheegay in shaqo muhiim ah laga qabtay Berdan Civata, Seçer wuxuu yiri, "Shaqaalaha jidhku waa dad adeegsada xoogga xoogga oo lacag ku dhisaan dhididkooda iyo carruurtooda. Tani waa qoys aad u weyn. Berdan Civata kaliya waxay soo saartaa gogol dhaaf, dhoofinta, kuma biiriso dhaqaalaha dalka. Xaqiiqdii, waxay bixisaa midnimada bulshada adoo adeegsanaya dadka. Tani aad ayey muhiim u tahay. Waxaan ahay duqa magaalada Aniga ayaa ah kan ugu nool. Waan ognahay quus-darada kuwa shaqo la’aanta ah, shaqo raadinta, rajo-gelinta hooyooyinka iyo aabayaasha, waana ka xun nahay. ”
"Guul dalka, guul bulshada, waxaad ku guulaysan Turkey"
Seçer wuxuu xusay in waajibaadkoodu uu yahay soo saarista xalka wuxuuna yiri, uz Waxaan u shaqeyneynaa isaga waana sii wadaynaa shaqadiisa. Dalkan, oo dhagxaanta dul dhigaya, shaqaaleysiinaya qof bini aadam ah, ayaa uga mahadcelinaya carruurta carruurtooda quudinta, waxbarashada, waxay gacan ka geysteen hurdada sariir diiran iyadoo la ixtiraamayo dhammaan ganacsatada, waxaan ku xasuustaa si xushmad leh ayuu yiri Kul.
Erdogan wuxuu muujiyay bartilmaameedka: Muhiimadda hay'adaha dawliga ah ee 3. farqiga!
Gawaarida Bilaashka ah ee Dhammaan Hay'adaha Dadweynaha
Iskudhin ka dhan ah hay'adaha
Baabuurta Gawaarida Gawaarida waxaa laga helaa Machadyada Bilecik
Metro Connection Project Mashruuca Xarunta Dhaqaalaha ee Istanbul
Qorshaha mashruuca Xarunta Maaliyadda ee Istanbul si uu ugu xiro lineka mitrooga Ataşehir
Wasiir Shimshe: Maalgashiga sii kordhaya ee TCDD ee dhaqaale dheeraad ah ...